Hamoaka vokatra vaovao… : hiverina amin-kery ny Mage 4 | NewsMada
Anisan’ireo tarika mpivoy ny gadona rock manana ny toerany ny Mage 4. 25 taona nisiana, ary nandalo sedra sy dingana maro ny tarika tao anatin’izay. Nangingina nandritra ny taona maro ny tarika Mage 4, indrindra taorian’ny nahalasanan-dRaMika, mpitendry gitara, tamin’ny taona 2011. “Cabaret” na fandraisana anjara amin’ny seho tsindraindray no hany nahatazanana ny tarika, nanamarihany ny fisiany.
Fantatra kosa izao fa ho avy ny fotoan’ny fiverenana an-kery ho an’ny tarika Mage 4. Hotontosaina amin’ity volana jona ity izany, raha ny nambaran’ireo mpikambana manohy ny tantara. Hisy ny seho goavana, izay homanin’ny tarika ny 19 jona izao, manomboka amin’ny 2 ora sy sasany, etsy Antsahamanitra. Eo no tena hanamarihana ilay fiverenana an-kery, satria ela no tsy nihaona tamin’ireo mpankafy teto Antananarivo, tamina sehatra goavana sy ankalamanjana ny tarika.
Anisan’ny vaovao lehibe faharoa entin’ny Mage 4 ny fivoahan’ilay rakikira “Fanatitra”. Tsangambaton’izay fiverenana izay ihany io, ary hirakitra ireo hira vaovao sy faramparany, araka ny fangatahan’ny mpankafy. Azo antoka fa ho voarakitra ao ny “Tsy sahy”, ilay hira nivoaka ny faran’ny taona 2015. Tsiahivina fa efa avy nihaona tamin’ireo mpankafy tany Ambatondrazaka sy Tsiroanomandidy ny Mage 4, mialoha ilay fihaonana lehibe.